“မသာစ ဆောင်၊ ကျောင်းစ ရှောင်” ဆိုရိုးစကား အဓိပ္ပါယ် - Barnyar Barnyar
April 25, 2022 thanzin laypyay Religious 0
“မသာစ ဆောင်…ကျောင်းစ ရှောင်”ဟူ သော ရှေးဆိုရိုး ဆုံးမစကား ရှိ၏ ။
” မသာစ ဆောင် ” ဆိုသည်မှာ နာရေး အသုဘတို့၌ ဝေငှသည့် သံဝေဂ လင်္ကာများ ပါသော ယပ်တောင်တို့ကို ဆောင်ထားခြင်းဖြင့် ထိုယပ်တောင်ကို မြင်တိုင်း… ထိုသံဝေဂ လင်္ကာတို့ကို ဖတ်မိတိုင်း…”
ငါလည်း… တစ်နေ့ .. သေရအုံးမှာ ပါလား”ဟု မမြဲခြင်း / ဆင်းရဲခြင်း / အစိုးမရခြင်း သဘောတို့ကို ဆင်ခြင်၍ သံဝေဂဉာဏ် ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တည်း ။
“ ကျောင်းစ ရှောင် ” ဆိုသည်မှာ လူတို့သည် သံဃာတော်များ ထံမှ သွားတိုက်ဆေး /တံ ၊ ဆပ်ပြာခဲ/မှုန့် ၊ မျက်နှာသုတ် ပဝါ စသည်တို့ကို ရတတ်၏။ ထို ပစ္စည်းများသည် စွန့်ကြဲသော ရဟန်းတစ်ပါးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက အကြောင်း မဟုတ်သော်လည်း…
သံဃိကဂရုဘဏ် ပစ္စည်းဖြစ်ပါက ကိုယ်ကျိုး နည်းကာ ဆိုးကျိုးများစွာ ဖြစ်နိုင်၏ ။
ထိုသံဃိကဂရုဘဏ် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုမိတိုင်း….. သံတွေခဲ , မီးကျီးခဲ , အဆိပ်သီးများကို စားသောက် ရသကဲ့သို့ ဖြစ်ရ၏။”
ဟ… ငါတို့ဘုန်းကြီးက ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်လေ သူကိုယ်တိုင် စွန့်လို့ ယူတာ ဘာအပြစ် ဖြစ်ရမှာတုန်း ” ဟုပြောဆိုကြသူများ ရှိကြ၏ ။
“ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီး ဖြစ်နေပါစေ” သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေပါစေ သံဃနာယကဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်နေပါစေ..။
“သံဃိကဂရုဘဏ္ဍာ” ပစ္စည်းများကို .. မိမိ သဘောထား ဆန္ဒအတိုင်း ပေးလို့မရ ။ စွန့်လို့မရ ။ ဝေဘန် ခွဲခြမ်းလို့မရ ။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း…? “မစွန့်အပ် / မဝေဘန်အပ်သော သံဃိကဂရုဘဏ် ပစ္စည်းတို့သည် ဝိနယပိဋကတ်၌ ပါရှိခြင်းကြောင့်တည်း……။
“ထိုပစ္စည်းတို့မှာ – ၁။ အာရာမ – အရံ။ ၂။ အာရာမဝတ္ထု – အရံနေရာ။ ၃။ ဝိဟာရ – ကျောင်းတိုက်။ ၄။ ဝိဟာရဝတ္ထု – ကျောင်းတိုက်နေရာ။
၅။ မဉ္စ – ညောင်စောင်း။ ၆။ ပီဌ – အင်းပျဉ်။ ၇။ ဘိသိ – ဘုံလျို။ ၈။ ဗိဗ္ဗောဟန – ခေါင်းအုံး။ ၉။ လောဟကုမ္ဘီ – ကြေးအိုး။ ၁၀။ လောဟဘာဏက – ကြေးအိုးစရည်း။
၁၁။ လောဟဝါတက။ ၁၂။ လောဟကဋာဟ – ကြေးဖျဉ်းအိုး။ ၁၃။ ဝါသိ – ပဲခွပ် (တံစဉ်း)။ ၁၄။ ဖရသု – ပုဆိန်။ ၁၅။ ကုဓာရီ – ဓားမ။ ၁၆။ ကုဒါလ – ပေါက်တူး။
၁၇။နိဒါဒနံ – ဆောက်။ ၁၈။ဝလ္လိ – နွယ်ပင်။ ၁၉။ဝေဠု – ဝါးပင်။ ၂၀။ မုဉ္ဇ – ဖြူဆံမြက်ပင်။ ၂၁။ပဗ္ဗဇ – ပြိတ်မြက်ပင်။ ၂၂။တိဏ – ကြွင်းသောမြက်။
၂၃။မတ္တိကာ – မြေညက်။ ၂၄။ဒါရုဘဏ္ဍာ – သစ်ဘဏ္ဍာ။ ၂၅။မတ္တိကာဘဏ္ဍ – မြေဘဏ္ဍာ။“ ဤသို့ (၂၅ )ခု သရုပ်ပြု သော်လည်း ဆိုင်ရာတစ်ခုချင်းကို ထပ်စိပ်သော် အမြောက်အများရ၏။
ထို့ကြောင့်… သံဃိကဂရုဘဏ္ဍာ(၂၅) မျိုး၌ အကျုံးဝင် သည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်း အတွင်း၌ ခရေပန်း ကောက်ခြင်း ၊ ခွေးတောက်ရွက်ခူးခြင်း ၊ သရက်သီးခူးခြင်း ၊ ပန်းကန်ခွက် ယောက်များကို ယူခြင်း ၊ ပေါက်တူး ပုဆိန် စသည်တို့ကို ယူခြင်းစသော သံဃိက ပစ္စည်းဟူသမျှ တို့ကို အထူးသတိထား၍ ရှောင်ကြဉ်ထိုက်၏။
“အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်… သံဃိက ပစ္စည်း မှန်ပါက သူခိုးတစ်ယောက်က ခိုးယူသွားပြီး ထိုသူခိုးက တခြားသူ ထံပြန်ရောင်း စသည်ဖြင့် ပိုင်ရှင် အဆက်ဆက် ပြောင်းသွားသော်လည်း သံဃိက ပစ္စည်းမှန်သမျှ သံဃိကပစ္စည်း အဖြစ်၌သာ တည်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ ။
“သံဃိကပစ္စည်း အဖြစ်၌ တည်နေပါက အသုံးပြုမိကြသော သူတို့သည် သံတွေခဲ… မီးကျီးခဲ … အဆိပ်သီး တို့ကို မျိုချကာ စားရသကဲ့သို့ ဖြစ်တော့၏။
ထိုထို အကြောင်းဖြစ်ရပ်တို့ကြောင့် -” ကျောင်းစ ရှောင် ” ဟူသော ရှေးသူတော်ကောင်းတို့၏ ဆုံးမစကားကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ပေ၏ ။
“အထူး အားဖြင့် သာသနာ့မြေ သံဃိကမြေများကို ငါပိုင်တယ် ငါတို့ ဘုန်း ကြီးပိုင်တယ် ငါတို့ဆွေမျိုး ဘုန်းကြီး ပိုင်တယ်ဟု ပြောဆို အလွဲသုံးစားပြုကာ ရောင်းချ/ ငှားရမ်း နေကြသူများ အထူး သတိပြုစေလိုပါသည် ။
(သံဃိကပစ္စည်း အလွဲသုံးစားမှုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတို့အတွက် ကပ်သဖွယ် ဆင်းရဲရခြင်း အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်၏) သစ္စာဓမ္မ မြင်နိုင်ကြပါစေ..။
“မသာစ ဆောငျ…ကြောငျးစ ရှောငျ”ဟူ သော ရှေးဆိုရိုး ဆုံးမစကား ရှိ၏ ။
” မသာစ ဆောငျ ” ဆိုသညျမှာ နာရေး အသုဘတို့၌ ဝငှေသညျ့ သံဝဂေ လင်ျကာမြား ပါသော ယပျတောငျတို့ကို ဆောငျထားခွငျးဖွငျ့ ထိုယပျတောငျကို မွငျတိုငျး… ထိုသံဝဂေ လင်ျကာတို့ကို ဖတျမိတိုငျး…”
ငါလညျး… တဈနေ့ .. သရေအုံးမှာ ပါလား”ဟု မမွဲခွငျး / ဆငျးရဲခွငျး / အစိုးမရခွငျး သဘောတို့ကို ဆငျခွငျ၍ သံဝဂေဉာဏျ ဖွဈနိုငျသောကွောငျ့တညျး ။
“ ကြောငျးစ ရှောငျ ” ဆိုသညျမှာ လူတို့သညျ သံဃာတျောမြား ထံမှ သှားတိုကျဆေး /တံ ၊ ဆပျပွာခဲ/မှုနျ့ ၊ မကျြနှာသုတျ ပဝါ စသညျတို့ကို ရတတျ၏။ ထို ပစ်စညျးမြားသညျ စှနျ့ကွဲသော ရဟနျးတဈပါးတညျးသာ ပိုငျဆိုငျသညျ့ ပုဂ်ဂလိက ပစ်စညျးမြားဖွဈပါက အကွောငျး မဟုတျသျောလညျး…
သံဃိကဂရုဘဏျ ပစ်စညျးဖွဈပါက ကိုယျကြိုး နညျးကာ ဆိုးကြိုးမြားစှာ ဖွဈနိုငျ၏ ။
ထိုသံဃိကဂရုဘဏျ ပစ်စညျးမြားကို အသုံးပွုမိတိုငျး….. သံတှခေဲ , မီးကြီးခဲ , အဆိပျသီးမြားကို စားသောကျ ရသကဲ့သို့ ဖွဈရ၏။”
ဟ… ငါတို့ဘုနျးကွီးက ကြောငျးထိုငျ ဆရာတျောလေ သူကိုယျတိုငျ စှနျ့လို့ ယူတာ ဘာအပွဈ ဖွဈရမှာတုနျး ” ဟုပွောဆိုကွသူမြား ရှိကွ၏ ။
“ကြောငျးထိုငျ ဘုနျးကွီး ဖွဈနပေါစေ” သာသနာပိုငျ ဆရာတျောကွီးဖွဈနပေါစေ သံဃနာယကဥက်ကဋ်ဌ ဆရာတျောကွီး ဖွဈနပေါစေ..။
“သံဃိကဂရုဘဏ်ဍာ” ပစ်စညျးမြားကို .. မိမိ သဘောထား ဆန်ဒအတိုငျး ပေးလို့မရ ။ စှနျ့လို့မရ ။ ဝဘေနျ ခှဲခွမျးလို့မရ ။
အဘယျ့ကွောငျ့နညျး…? “မစှနျ့အပျ / မဝဘေနျအပျသော သံဃိကဂရုဘဏျ ပစ်စညျးတို့သညျ ဝိနယပိဋကတျ၌ ပါရှိခွငျးကွောငျ့တညျး……။
“ထိုပစ်စညျးတို့မှာ – ၁။ အာရာမ – အရံ။ ၂။ အာရာမဝတ်ထု – အရံနရော။ ၃။ ဝိဟာရ – ကြောငျးတိုကျ။ ၄။ ဝိဟာရဝတ်ထု – ကြောငျးတိုကျနရော။
၅။ မဉ်စ – ညောငျစောငျး။ ၆။ ပီဌ – အငျးပဉျြ။ ၇။ ဘိသိ – ဘုံလြို။ ၈။ ဗိဗ်ဗောဟန – ခေါငျးအုံး။ ၉။ လောဟကုမ်ဘီ – ကွေးအိုး။ ၁၀။ လောဟဘာဏက – ကွေးအိုးစရညျး။
၁၁။ လောဟဝါတက။ ၁၂။ လောဟကဋာဟ – ကွေးဖဉျြးအိုး။ ၁၃။ ဝါသိ – ပဲခှပျ (တံစဉျး)။ ၁၄။ ဖရသု – ပုဆိနျ။ ၁၅။ ကုဓာရီ – ဓားမ။ ၁၆။ ကုဒါလ – ပေါကျတူး။
၁၇။နိဒါဒနံ – ဆောကျ။ ၁၈။ဝလ်လိ – နှယျပငျ။ ၁၉။ဝဠေု – ဝါးပငျ။ ၂၀။ မုဉ်ဇ – ဖွူဆံမွကျပငျ။ ၂၁။ပဗ်ဗဇ – ပွိတျမွကျပငျ။ ၂၂။တိဏ – ကွှငျးသောမွကျ။
၂၃။မတ်တိကာ – မွညေကျ။ ၂၄။ဒါရုဘဏ်ဍာ – သဈဘဏ်ဍာ။ ၂၅။မတ်တိကာဘဏ်ဍ – မွဘေဏ်ဍာ။“ ဤသို့ (၂၅ )ခု သရုပျပွု သျောလညျး ဆိုငျရာတဈခုခငျြးကို ထပျစိပျသျော အမွောကျအမြားရ၏။
ထို့ကွောငျ့… သံဃိကဂရုဘဏ်ဍာ(၂၅) မြိုး၌ အကြုံးဝငျ သညျ့ ဘုနျးကွီးကြောငျးဝနျး အတှငျး၌ ခရပေနျး ကောကျခွငျး ၊ ခှေးတောကျရှကျခူးခွငျး ၊ သရကျသီးခူးခွငျး ၊ ပနျးကနျခှကျ ယောကျမြားကို ယူခွငျး ၊ ပေါကျတူး ပုဆိနျ စသညျတို့ကို ယူခွငျးစသော သံဃိက ပစ်စညျးဟူသမြှ တို့ကို အထူးသတိထား၍ ရှောငျကွဉျထိုကျ၏။
“အဘယျကွောငျ့ ဆိုသျော… သံဃိက ပစ်စညျး မှနျပါက သူခိုးတဈယောကျက ခိုးယူသှားပွီး ထိုသူခိုးက တခွားသူ ထံပွနျရောငျး စသညျဖွငျ့ ပိုငျရှငျ အဆကျဆကျ ပွောငျးသှားသျောလညျး သံဃိက ပစ်စညျးမှနျသမြှ သံဃိကပစ်စညျး အဖွဈ၌သာ တညျနသေောကွောငျ့ဖွဈ၏ ။
“သံဃိကပစ်စညျး အဖွဈ၌ တညျနပေါက အသုံးပွုမိကွသော သူတို့သညျ သံတှခေဲ… မီးကြီးခဲ … အဆိပျသီး တို့ကို မြိုခကြာ စားရသကဲ့သို့ ဖွဈတော့၏။
ထိုထို အကွောငျးဖွဈရပျတို့ကွောငျ့ -” ကြောငျးစ ရှောငျ ” ဟူသော ရှေးသူတျောကောငျးတို့၏ ဆုံးမစကားကို လိုကျနာ ဆောငျရှကျသငျ့ပေ၏ ။
“အထူး အားဖွငျ့ သာသနာ့မွေ သံဃိကမွမြေားကို ငါပိုငျတယျ ငါတို့ ဘုနျး ကွီးပိုငျတယျ ငါတို့ဆှမြေိုး ဘုနျးကွီး ပိုငျတယျဟု ပွောဆို အလှဲသုံးစားပွုကာ ရောငျးခြ/ ငှားရမျး နကွေသူမြား အထူး သတိပွုစလေိုပါသညျ ။
(သံဃိကပစ်စညျး အလှဲသုံးစားမှုမြားသညျ ဗုဒ်ဓဘာသာမွနျမာတို့အတှကျ ကပျသဖှယျ ဆငျးရဲရခွငျး အကွောငျးတဈခုဖွဈနိုငျ၏) သစ်စာဓမ်မ မွငျနိုငျကွပါစေ..။
နာရီဟောင်း တစ်လုံးက ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ
Total Hits : 333260